Bogga ugu weyn Imisa Xisaab Bangi Ayaa Leh Inaan Leeyahay | Tilmaan Buuxo
Ma xuma haddii aad si joogto ah isu weydiiso, 'imisa xisaab baan baan leeyahay?' In kasta oo aysan jirin jawaab caadi ah inta xisaab bangi ee aad haysan karto.
Koontooyin bangi oo kala duwan ayaa xiisa gelinaya la socoshada caadooyinkaaga kharajka Laakiin, marka ay badato, waxay adkaynaysaa habka raadraaca.
Markaad sii akhrido, waxaad arki doontaa inta xisaab bangi ee ay tahay inaad yeelato iyo sida ay kaaga caawineyso inaad gaarto yoolalkaaga maaliyadeed.
Waa maxay Noocyada Xisaabaadka Bangiga ee ay tahay inaad lahaato?
Qodobka ugu muhiimsan ee ogaanaya noocyada xisaabaadka bangiga ee ay tahay inaad haysato waa fahamka baahiyahaaga.
#1 Xisaabta Kaydka
Nooca koontadan wuxuu ku yimaadaa saddex nooc. Aan aragno xisaabaadka kaydka ee kala duwan iyo ujeeddooyinka kala duwan ee ay u adeegaan.
In kasta oo xisaabaadka kaydku ay la socdaan xaddidaadda tirada bixitaanka ee aad samayn karto, noocyada kale ee koontada kaydka ayaa laga yaabaa inay ku shaqeeyaan baahidaada.
Koontada Keydadka ee Joogtada ah
Kani waa koontada kaydka ee ugu badan ee aad ku kaydsato kaydkaaga. Waxaad kasbataa dulsaar yar waxaadna ka baxaysaa koontada adigoon xadidnayn.
la xiriira: 10 Siyaabood Oo Jaban Oo Lacag Looga Helo Hawlgabka
Koontada Kaydka ee onlaynka ah
Marka la eego kororka sare ee bangiyada onlaynka ah ee bixiya heshiisyada afka lagu waraabinayo, waxaad u baahan tahay inaad yeelato koonto kayd oo onlayn ah oo aad ku raaxaysan karto adeeg deg-deg ah oo keliya.
Ka hor intaan tan la samayn, waxaa lagaa doonayaa inaad ku xirto koonto jeeg oo hadda jira koontadaada kaydka.
Koontadani waxay qufulaysaa lacagtaada koontada 6 ilaa 18 bilood iyada oo ku xidhan xulashadaada.
Haddii aad tahay mid u baahan lacag caddaan ah, tani ma noqon karto nooca koontada ugu fiican ee la hayo.
#2 Koontada Hubinta
Nooca koontada noocaas ah waa mid jeeggaagu soo galo oo wuxuu ku siinayaa sida ugu habboon ee lagu heli karo lacagtaada waxaana asal ahaan loo adeegsadaa bixinta biilka.
Lahaanshaha koontada jeeggu waxay ku siinaysaa ikhtiyaarka aad ku fulin karto macaamil ganacsi intii aad samayn lahayd bil gudaheed.
#3 Xisaabaadka Maalgashiga Hawlgabka
Waxaad u baahan tahay inaad taxaddar dheeraad ah yeelato marka aad dooranayso tan maadaama kaalinteeda aasaasiga ahi ay tahay inay kaa caawiso inaad ku sii socotid yoolkaaga kaydka hawlgabka.
Dalbashada bixitaanka kahor taariikhda hawlgabkaagu waxay noqon kartaa mid aad khatar u ah waxaanan hubaa inaadan rabin inaad ogaato waxay qaadanayso.
Noocyada xisaabaadka hawlgabka ee ay tahay inaad ka faa'iidaysato oo aad ku sii jirto qorshayaasha hawlgabkaaga waa:
Koontada hawlgabka shaqsiga (IRA)
403 (b) ama 457 (b)
#4 Koontada Maalgashiga ee aan hawlgabka ahayn
Haddii ay dhacdo inaad weli haysato lacago dheeraad ah ka dib koontada hawlgabka, tani waxay noqon kartaa ikhtiyaar weyn oo la tixgeliyo.
Koontadan ytpe ayaa kaa caawin doonta inaad samayso kaydad badan oo ka badan kuwii hore u jiray.
Sidoo kale akhri: Lacag intee le'eg ayay tahay inaan sameeyo: Istaraatiijiyadda Maaliyadeed ee Shaqsiga
#Kaydinta Kuleejka (5b)
Koontada 529b waa mid kaa caawineysa inaad lacag u keydiso waxbarashada carruurtaada laga soo bilaabo heerka hoose ilaa kulliyadda iyo kulliyadda kadib.
Faa'iidada ugu weyn ee ku kaydinta akoonkan ayaa ah in ka bixitaan kasta oo la sameeyo si loo sameeyo xisaabtaan xilliyada suugaanta iskuulka waa canshuur la'aan.
Faa'iidooyinka iyo Qasaaraha haysashada Xisaabaadka Bangiyada Badan
Asal ahaan, lahaanshaha xisaabaadyo bangi oo badan ayaa ku siinaya faa'iidooyinka dhowr koonto ay bixiyaan gaar ahaan xiisaha iyo dabacsanaanta sare.
Marka labaad, dadku waxay furayaan akoonno badan intii suurtogal ah si ay uga faa'iidaystaan ​​dalabyada is-qoritaanka. Inta badan xisaabaadka keydintu waxay dhaafaan dhowr doolar oo ah dalabyada is-qoritaanka.
Intaa waxaa sii dheer, lahaanshaha akoonno bangi oo badan ayaa kaa caawineysa inaad sameyso go'aanno maaliyadeed oo habboon oo aad u xilsaarato howlo gaar ah lacagtaada.
Furitaanka xisaabaadyo bangi oo badan way adag tahay in la maareeyo oo markeeda, waxay kaa dhigaysaa inaad halis ugu jirto inaad la kulanto khidmad dheeraad ah.
Had iyo jeer dib -u -dhac ayaa jira marka aad rabto inaad lacag ku kala wareejiso xisaabaadka. Ths waa kaliya sababtoo ah bangiyadaadu waa inay ku sameeyaan layli xaqiijin bangiyada.
Marka, waxay qaadataa ilaa 3 maalmood maalmaha shaqada si loo hagaajiyo.
Sida Loo Maareeyo Xisaabaadka Bangiyada Badan
Barnaamijyada bangiyada onlaynka ah iyo barnaamijyada miisaaniyadda ayaa fududeeyay maaraynta akoonno bangi oo badan.
Waxa kale oo aad dooran kartaa inaad si otomaatig ah u maamusho dhaqaalahaaga si aad ugu wareejin karto koontadaada kaydka oo aad biilkaaga uga bixin karto koontadaada biilka.
Fikradaha kama dambaysta ah: Imisa Xisaabaad Baan baan leeyahay?
Ma jirto jawaab sax ah ama khaldan su'aasha kore. Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa inaad hubiso inay waafaqsan yihiin yoolalkaaga.
Sidoo kale, hubso in xisaabaadka aad furaysid ay noloshaada kuu fududeeyaan oo ay lacag dheeraad ah kaa dhigaan maadaama ay noqon doonto mid aan laga maarmin xisaabaadka midkoodna uusan waxyaalahan samaynayn.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad ka heli karto caddeyn ku saabsan sida aad u isticmaasho lacagtaada, lahaanshaha xisaabaadyo bangi oo badan ayaa noqon kara hab caqli leh oo aad ku tagi karto.
Waxaan sidoo kale ku talinaynaa Kuwaan:
Sida Lacag Loogu Sameeyo 50000 oo Doollar Sannadka 2021: Hagaha Tallaabo-Tallaabo ah
Sida Loo Noqdo Lataliye Maareyn 2022
La-talinta ayaa weli ah mid ka mid ah waddooyinka ugu caansan shaqada ee loogu talagalay ardayda ka qalin-jabisa MBA, kuwaas oo gala noocyo kala duwan oo heer sare ah…
Ku haynta lacagta bangiga dadka qaar waxay u muuqataa dhib ka badan inta ay mudan tahay. Balse su’aashu waxay tahay, halkee...
20 -ka ugu sarreeya ee Moguls Real Real ee sannadka 2021
Maalqabeennada guryaha ee adduunka oo dhan ayaa si aasaasi ah ugu biiriya liiska dadka ugu taajirsan adduunka…
Bangiyada ugu Fiican Australia 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Australia waa dalka ugu weyn ee Oceania waxayna weli tahay magaalada lixaad ee ugu weyn adduunka dhul ahaan…